Haweeney 90 jir ah oo daqiiqadii u dambeysay musaafuris laga joojiyay | Somaliska
Haweeney 90 jir ah oo daqiiqadii u dambeysay musaafuris laga joojiyay
Haweenay 90 jir ah oo ka soo jeeda dalka Ukrain oo maalmihii la soo dhaafay dood kulul ka dhalatay ka dib markii laanta Socdaalku ay go’aansatay in la musaafuriyo ayaa daqiiqadii u dambeysay la joojiyay in dalka laga saaro ka dib markii Maxkamada xuquuqda aadanaha ee midowga Yurub ay go’aamisay in aan la musaafurin karin inta kiiskeeda ay eegayaan.
Haweeneydaan oo saakay u dhaqaaqday dhinaca ayroboorka Arlanda ayaa markii ay ka baxday magaalada waxaa soo wacay Laanta Socdaalka oo sheegay in si ku meel gaar ah dib loogu dhigay musaafurinteeda maadaama maxkamada Yurub ay sidaa go’aamisay.
Haweeneydaan waayeelka ah oo la nool gabadh ay ayeeyo u tahay ayaa dhowr jeer diidmo ka heshay Laanta Socdaalka ka dib markii ay diideen dacwadeeda oo ku saleysneyd in ay xanuun wadnaha ka qabto isla markaana caruurteeda ay halkaan ku nool yihiin. Laanta Socdaalka ayaa diiday dacwada haweeneydaan iyaga oo sheegay in cudurkeeda lagu daaweyn karo dalkeeda.
Musaafurinta haweeneydaan ayaa waxaa cambaareeyay qeybaha kala duwan ee bulshada iyadoo loogu baaqay Laanta Socdaalka in aysan musaafurin haweeneydaan 90 jirka ah maadama aysan wax badanba uga harin nolosha isla markaana aysan cid ku daryeesha u joogin Ukrain.
Asc,Bismillah, Waa gaal iyo naxariis darnaantiisa, Muslimka aad wada aragtaan ee dalalka dowladahooda gaalada yihiin ku nool jaceyl loo qabo ma aha ee waa in ALLA ku risaaqay oo uu wax kaga soo qaaday, Waad aragtaan sida dhexdooda isku neceb yihiin, Bal ma idinla tahay haddii haweeneydaan dhul muslim joogi laheeed in sidaan oo kale loogula dhaqmi lahaa? Waa maya, Islaamka iyo Muslimkuba kor ALLAH ka yeelo Ameen…